IBarracks kwi-Starr's Point-iGumbi lokuPhilisa - I-Airbnb
IBarracks kwi-Starr's Point-iGumbi lokuPhilisa
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguStuart
I-Barracks inika indawo yokusabela ezolileyo entliziyweni ye-Annapolis Valley.
Ukuqhuba imizuzu emihlanu ukusuka eWolfville, kunye nemizuzu eyi-15 ukuya kwiGasperau Valley kunye neCanning. Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala emva kokutyelela ezona ndawo zewayini zalapha ekhaya, iigalari zobugcisa, iindawo zokutyela, iindawo zokunyuselwa iintaba kunye neendawo zotywala ezifumaneka kwiValley.
I-Barracks yeyona ndawo ifanelekileyo yokungena emva kosuku olugcweleyo lokujonga intlambo yase-Annapolis okanye ipropathi ethe cwaka yasemaphandleni ukuze ubuyele umva kwaye uphumle.
Ijikelezwe ngamadlelo kunye nemithi emidala ekhula, ingasemva ijonge emazantsi ivumela ilanga langokuhlwa ukuba lihluze emithini ngelixa lijonge intsimi apho amahashe atyela khona kwaye ngubani osoloko esiza kucingo olungasemva ukuze athi 'hi'.
Ipropathi eyimbali eyakhiwa ngo-1778 ebizwa ngokuba yiFort Hughes, yayakhiwe ekuqaleni ukukhusela kuhlaselo lwaseMelika olwalulindelwe.
Ihlaziywe ngokupheleleyo kabini kule minyaka imbalwa idlulileyo, igcina intsusa yayo kunye nomlingiswa, ngelixa ibonelela iindwendwe ngezinto zale mihla.
Xa ubhukisha igumbi labucala iKitchen, igumbi lokuhlala kunye neyadi yangasemva ziindawo eziqhelekileyo kunye nezinye iindwendwe ezinokubakho ezinokuba lapho ngaxeshanye.
IPort Williams yilali encinci ebekwe ngaphaya komlambo iCornwallis ukusuka eWolfville. Ngokubanzi uluntu oluncinci lwamafama, kule minyaka yakutsha nje lukhule lwaya kutsho kwindawo ekusingwa kuyo ukufumana iindawo zokutyela zasekhaya, iiwineri, idistillery kunye nelizwe elithandekayo lelizwe elijonge iBay of Fundy.
Umbuki zindwendwe ngu- Stuart
Uya kunikwa ikhowudi engundoqo yokungena endlwini kunye nesitshixo segumbi lakho labucala ngoko akukho mfuneko yokunxibelelana nathi, nangona kunjalo sikufutshane ukuba kukho nayiphi na imiba.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Port Williams